UMashi kungaba yinyanga yemikhiqizo yokuqala yakwa-Apple yalo 2018 | Ngivela kwa-mac
UMashi kungaba yinyanga yemikhiqizo yokuqala yakwa-Apple yalo 2018
Sonke sijahile ukubona ukuthi yini ezoba yinto yokuqala i-Apple ezosethulela yona kulo nyaka ngokuya ngehardware entsha, kusobala ukuthi ukuba nezindaba zesoftware kuhlale kubalulekile kuwo wonke umuntu ngoba ihlanganisa abasebenzisi abaningi, kepha ukuba namadivayisi amasha nakho ukukhuthaza wonke umuntu futhi ngokusho kwe-DigiTimes, I-Apple izokwethula owokuqala wale 2018 ngenyanga kaMashi.
Abaphakathi bakhuluma ngemikhiqizo eminingana eyethulwe ngalesi sikhathi eminyakeni eyedlule kepha empeleni asikwazi ukunaka kakhulu lokhu selokhu i-Apple yaba njalo ayinazo izinsuku ezicacile zokukhishwa ngaphandle kwama-iPhones.
Kulokhu sinokuthi esikhathini esedlule inkampani yethule phakathi nenyanga kaMashi iMacBook entsha, bese kuba yi-iPhone 7 ebihambisana nomkhankaso we- (Product) RED futhi ngenyanga efanayo ngonyaka odlule i-iPad eshibhe futhi elula kunazo zonke ye-iPad yayo ububanzi. Kulo nyaka sibonile ngokweminye imibiko eputshuke ngezintambo zokukhiqiza imikhiqizo emisha ngalenyanga kaMashi, kepha akukho okucacile noma okuqinisekisiwe njengamanje.
Okudingeka kakhulu ukucabanga ngalokho abakukhombisile kepha abangakhululwa, yi ishaja engenantambo yamadivayisi ahlukene abhabhadiswe yi-Apple njenge-AirPower nebhokisi lokushaja okungenantambo le-AirPods ithunyelwe ngosuku olufanayo kepha ayikhishwa. Ngaphandle kwalezi zesekeli singahlala sicabanga ukuthi i-Apple inokuthile okulindelwe ukusimangaza kepha phakathi nezinyanga zikaNdasa abavamisile ukwethula imikhiqizo eminingi kakhulu ngaphandle kwalokhu esinakho etafuleni, sizobona ukuthi kwenzekani ekugcineni ngakho konke lokhu nokuthi bazosibonisa ini ngenyanga ezayo uma kukhona okusha okufana neMac mini? Sizobona ukuthi kwenzekani ...
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Amahemuhemu » UMashi kungaba yinyanga yemikhiqizo yokuqala yakwa-Apple yalo 2018
I-Aerofly FS 2 Flight Simulator, indiza esiza ku-Mac App Store
Faka i-geolocation ezithombeni zakho kusuka kuhlelo lokusebenza lwezithombe